WatchOS 3.1 uye tvOS 10.0.1 Zvekupedzisira Shanduro Zvino Zviripo | Ndinobva mac
Ekupedzisira vhezheni dzeOSOS 3.1 uye tvOS 10.0.1 yave kuwanikwa
Apple ichangobva kuburitsa mavhezheni ese ari maviri zviri pamutemo kune vese vashandisi veApple Watch uye Apple TV, ino nguva ndezve watchOS 3.1 uye tvOS 10.0.1. Kune rimwe divi, taura zvakare kuti iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 10.1 yakatoburitswa saka isu takatarisana nekushomeka kwekupedzisira vhezheni yeMacOS Sierra 10.12.1 kuve neese aripo mavhezheni eApple michina. Iyi yekuvandudza Mac haizotora nguva yakareba kuti isunungurwe (zvinotora nyaya yemaminitsi) saka munhu wese anoteerera sekutarisira kwedu kuti ichavhurwa zviri pamutemo nhasi.
Kana dziri idzi shanduro nyowani dzechina chizvarwa Apple TV uye ese Apple Watch mamodheru, isu tinowana zvakati wandei madhigi ekugadzirisa uye mhinduro kumatambudziko eshanduro dzapfuura. Panyaya yeiyo Apple wachi yekugadzirisa isu tinofanirwa kuve neiyo yazvino vhezheni yeIOS yakaiswa pane yedu iPhone uyezve isu todarika iyo yekuvandudza mukati meApple Watch application. Rangarira kuti isu tinofanirwa kuve ne50% bhatiri uye tiine wachi yakabatana nechaja. Kana iri Apple TV kana tangoivhura, inofanirwa kuzviratidza yega iyi vhezheni itsva, asi kana ukasazviita kubva pazvirongwa tinokwanisa kurodha pasi nekumisikidza.
Sezvatinonyora chinyorwa ichi Iyo yepamutemo vhezheni ye macOS Sierra haioneke asi zviri pachena kuti kana zvikasaoneka nhasi tichava nazvo zvekurodha mangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ekupedzisira vhezheni dzeOSOS 3.1 uye tvOS 10.0.1 yave kuwanikwa
Uye ... macOS Sierra 10.12.1 inowanikwawo kune wese munhu
Matatu Mac Models Akadonhedzwa neChina: A1706, A1707 uye A1708